Inqaba ephakathi ye-Massadou - I-Airbnb
Inqaba ephakathi ye-Massadou
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguFrançois
Inqaba yonogada yakudala ukususela ngenkulungwane ye-13, yalungiswa ngokupheleleyo ngo-2015. Amagumbi amathathu. Uthando. Ukubona indawo entle ukusuka kwintente eseluphahleni kwilali yakudala (iicawa zamaRoma, i-abbaye yamabhinqa).
Le nqaba yakudala ukususela ngenkulungwane ye-13 yasetyenziswa njengenqaba yonogada yale lali, yaza yaguqulwa yaba yiloft yehobe ngenkulungwane ye-19. Inqaba yalungiswa ngokupheleleyo ngo-2015. Ikhethekile, inothando, ayikhetheki. Jonga enye yeedolophana "ezintle eFransi" (iicawa zamaRoma, i-abbaye yakudala yamabhinqa).
Ifumaneka kwimizuzu eyi-5 ukusuka kwisitrato esiyi-A75 (phuma 22)
Ukufikelela kwinqaba ngokuhamba kuphela (iikhilomitha eziyi-150 ukusuka embindini welali yaseBlesle)
Ukuba ufuna ukuqesha indlu engasemva yesibini ekufutshane (https://www.airbnb.fr/rooms/5744878) ukuze uze nosapho okanye abahlobo.
Ngokuqhelekileyo kummandla waseAuvergne, ilali yaseBlesle (pop. 500) igcine zonke izithethe zayo kwizakhiwo zayo zakudala. Kulula ukufikelela kwiindlela eziphakamileyo ze-A75 (ukuphuma 22) kwaye amathuba okuhamba kulo mmandla abuhlungu. Abakhweli bangabuka imifula yasendle kunye neentaba eziphakamileyo zeCézallier plateau.
Zonke iivenkile (iivenkile zezinto ezibhakiweyo, umxheli, ukutya, izikhumbuzo,...) ezikufutshane.
Njengoko ndishiya eGrenoble (ndikude ngeeyure eziyi-3 ngemoto), andikwazi ukuba seBlesle ngalo lonke ixesha. Ukusebenzisana nge-imeyile nangeselfowuni kunokwenzeka, kunye nabantu abasuka kwilali abagcina izitshixo zenqaba.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Blesle